यी पाँच कलाकार, जो फिल्मको लागि किस सिन दिन पुरै अस्वीकार गर्छन् | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more यी पाँच कलाकार, जो फिल्मको लागि किस सिन दिन पुरै अस्वीकार गर्छन्
काठमाडौं । किसिङ्ग सिनलाई हलिउड फिल्ममा सामान्य मानिन्छ । कतिपय बलिउड फिल्ममा पनि किसिङ्ग सिन देख्न पाइन्छ । फिल्मको कथाअनुसार प्रेम जोडी या आफ्ना पारिवारिक सदस्यका बीच किस गरेको देखिन्छ । तर कतिपय बलिउड कलाकार किसिङ्ग सिनलाई पुरै इन्कार गर्दछन् । चर्चित पनि रहेका ती कलाकारले किस सिन आए कि कथा फेर्छन् या कि फिल्न नै छोड्छन् ।
फिल्ममा किस सिन नै दिन नचाहने कलाकारको बारेमा आज हामीले तपाईलाई जानकारी दिँदैछौं । केहि त्यस्ता हस्ति जसको फिल्म सुपरहिट छ तर उनको फिल्ममा किसको सिन भने हुँदैन् । जानौं ती पाँच चर्चित बलिउड स्टारको बारेमा जसले किस सिन दिन पुरै अस्वीकार गर्दछन् ।
सलमान खानले कयौं रोमान्टिक फिल्म खेलेका छन् । ती फिल्म सुपरहिट पनि भएका छन् । तर सलमान खान फिल्ममा कतिसम्मको भूमिका निभाउने भन्नेमा भने निकै कडा छन् । उनले कहिल्यै पनि कुनै पनि फिल्ममा किस सिन दिन स्वीकार गर्दैनन् । जुन कुरा उनको फ्यानले पनि निकै रुचाएका छन् ।
२. शिल्पा सेट्टी
शिल्पा सेट्टी आफ्नो जमानाकी चर्चित कलाकार हुन् । उनका थुप्रै फिल्म सफल पनि छन् । पछिल्लाे समय उनी फिल्म क्षेत्रबाट थोरै हराएकी छिन् । शरिर मेन्टेन्टको विषयमा चर्चामा रहने सेट्टी अत्यन्तै सुन्दरी नायिका मध्येमा पर्दछिन् । सेट्टीले दर्जनौं फिल्म खेल्दै गर्दा अनस्क्रिन किसलाई भने अस्वीकार गरेकी छन् ।
३. सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी सिन्हाले पहिलो फिल्मको लागि साइन गर्दै गर्दा आफुँ कुनै पनि विकिनी र किस सिन नदिने जनाइएकी थिइन् । उनले अहिलेसम्म पनि कुनै खालको रियल किस सिन दिएकी छैनन् । थोरै फिल्मबाटै चर्चित भएकी सिन्हालाई फिल्म क्षेत्रमा कडा स्वभावकी भनेर चिनिन्छ ।
४. अजय देवगण
बलिउडमा ‘सिंघम’ भनेर सम्बोधन गरिने अजय देवगण फिल्मको लागि निकै कडा शैलीका छन् । उनि कथा र भूमिका दुवै चित्त नबुझेसम्म फिल्म नै खेल्दैनन् । भनिन्छ, भूमिकामा उनलाई कहिँ शंका लाग्यो भने उनि फिल्म नै रिजेक्ट गर्छन् । उनि फिल्ममा कुनै किस सिन आयो भने पुरै कथा नै चेन्ज गराउँछन् अनि मात्रै खेल्छन् ।
५. तमन्ना भाटिया
बाहुबली फिल्मबाट निकै चर्चामा आएकी तमन्ना भाटिया अनस्क्रिन किस सिन दिन अस्वीकार गर्ने कलाकारमा गनिन्छिन् । सुन्दरी भाटियाले फिल्म खेल्नुभन्दा अगाडि नै किस सिन नगर्ने भनि सम्झौता गराउने गर्दछिन् । (एजेन्सीकाे सहयाेगमा)
पुस २० गते, २०७६ - १५:३२ मा प्रकाशित